MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Happy Friday Data Carry+ FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
DATA » Happy Friday Data Carry Plus with Free Night Facebook
Happy Friday Data Carry Plus with Free Night Facebook
၁။ Happy Friday Data Carry Plus with Free Night Facebook ဆိုတာဘာလဲ?
သောကြာနေ့တိုင်းတွင် Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်းဒေတာ(MB) များအပြင် ည ၁၁နာရီမှ မနက် ၆နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ အကြိုက်သုံး Facebook အသုံးပြုခွင့် ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ Data Carry Plus Pack မှ Data အားလုံးကို သက်တမ်း မကုန်ခင် သုံးစွဲပြီးသော်လည်း ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၆)နာရီ အထိ Facebook အသုံးပြုခွင့် ကို ယင်းပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းမကုန်ခင်အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံမှု/ကျသင့်မှုရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၂။ သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus with Free Night Facebook Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အပိုဆောင်းဒေတာ (MB) များရရှိမည့် အပြင် ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူပါက ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၆)နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၆၉၉ကျပ် 415MB	 15MB
၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်] *777*1# 1332 သို့ DC1 ဟုပေးပို့ရန် *777#	 *224#
၇၉၉ကျပ် 630MB 20MB *777*2# 1332 သို့ DC10 ဟုပေးပို့ရန်
၉၉၉ကျပ် 905MB 30MB *777*3# 1332 သို့ DC2 ဟုပေးပို့ရန်
၁၂၉၉ကျပ် 1180MB	 35MB *777*4# 1332 သို့ DC3 ဟုပေးပို့ရန်
၁၇၉၉ကျပ် 1630MB	 55MB *777*5# 1332 သို့ DC4 ဟုပေးပို့ရန်
၂၆၉၉ကျပ်	 2450MB 70MB *777*6# 1332 သို့ DC5 ဟုပေးပို့ရန်
၄၄၉၉ကျပ် 4100MB 120MB	 *777*7# 1332 သို့ DC6 ဟုပေးပို့ရန်
၈၉၉၉ကျပ်	 8200MB	 240MB *777*8# 1332 သို့ DC7 ဟုပေးပို့ရန်
၁၇၉၉၉ကျပ် 16400MB 450MB *777*9# 1332 သို့ DC8 ဟုပေးပို့ရန်
၂၆၉၉၉ကျပ် 24500MB	 800MB *777*0# 1332 သို့ DC9 ဟုပေးပို့ရန်
၃။ သောကြာနေ့မှာ Htaw B Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့မှာ Htaw B Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အပိုဆောင်း Htaw B Balance များရရှိမှာပါ။
(ကျပ်) Htaw B ဖုန်းဘေလ် (ကျပ်) အပိုဆောင်း Htaw B ဖုန်းဘေလ် သက်တမ်း Htaw B ဖုန်းဘေလ်ရယူရန် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
၁၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက် *5001# 1332 သို့ 1000 ဟုပေးပို့ရန် *500# *224#
၂၀၀၀ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက် *5002# 1332 သို့ 2000 ဟုပေးပို့ရန်
၅၀၀၀ ကျပ် ၂၅,၀၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက် *5005# 1332 သို့ 5000 ဟုပေးပို့ရန်
၄။ Happy Friday Data Carry Plus with Free Night Facebook ကိုဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင် ပါသလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူများ နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA ၊ Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံး ပြုခြင်း မရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ Data Carry Plusဝယ်ယူပြီး Facebook မှ ဗွီဒီယိုအားလုံးကြည့်လို့ရမှာလား?
၆။ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေ အတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏ များလည်း ပေါင်းစည်းသွားမယ့်အပြင် ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၆)နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ Facebook အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် ကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သောကြာနေ့မှာ ၇၉၉ကျပ်တန် Data Carry Plus Pack ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့်မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
သောကြာနေ့မှာ ၆၉၉ကျပ်နှင့် ၇၉၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ်အပါအဝင် မည်သည့် Data Carry Plus Packs များဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်းဒေတာများရရှိမှာပါ။ ထို့အပြင် ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack များဝယ်ယူပါက အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် (ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအထိ)ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၈။ နိုဝင်ဘာ(၆)ရက်နေ့မှာ Data Carry Plus Pack ကိုဝယ်ထားပါတယ်။ Unlimited Viber ကိုသုံးစွဲလို့ရပါသလား?
မရပါ။ အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက်မှနိုဝင်ဘာ(၅)ရက်အတွင်း Data Carry Plus ဝယ်ယူထား၍ သက်တမ်းကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်များသည် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ Viberနှင့် (ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအထိ) Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို ယင်းပက်ကေ့ချ် များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ(၆)ရက်နေ့ မှ စတင်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများသည် အခမဲ့ အကြိုက်သုံး Facebook အသုံးပြုခွင့် (ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၆ နာရီအထိ)ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၉။ သောကြာနေ့မှာ အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရတာအပြင် တခြားပြောင်းလဲသွားတာတွေရော ရှိပါသလား?
ရှိပါတယ်။ Data Carry Plus မှာ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းနှင့် သက်တမ်းတို့အပြင် ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack များဝယ်ယူပါက Facebook အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် (ည၁၁နာရီမှ မနက်၆နာရီအထိ) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Htaw B Pack အတွက် အထူးနှုန်းထား၊ သက်တမ်းအစရှိတဲ့ ခံစားခွင့်များအတိုင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ***Htaw B Pack သုံးစွဲသူများသည် အခမဲ့ Facebook သုံးစွဲခွင့်ကို မရရှိနိုင်ပါ။
၁၀။ Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မှာပါလဲ?
Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်၊ စာတိုပေးပို့ရန်နှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အတွက်သုံးစွဲသူဝယ်ယူသည့်ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင် မှာပါ။ ဥပမာ – သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းဘေလ် ၁,၀၀၀ကျပ်ကို Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၅,၀၀၀ကျပ် ပြောင်းလဲပါက အပိုဆောင်းလက်ဆောင် ၂၀၀ ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး [စုစုပေါင်း ၅၂၀၀ကျပ်ကို] ၁၅ ရက်ကြာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ သောကြာနေ့မှာ အခြားပက်ကေ့ချ် (Social pack, night time data pack, voice pack) တွေဝယ်ယူပါတယ်။ အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရရှိမှာလား?
မရရှိပါ။ MPT ၏ လူကြိုက်အများဆုံးပက်ကေ့ချ်များဖြစ်သည့် Htaw B နှင့် Data Carry Plus Packs များဝယ်ယူပြီး အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များရယူလိုက်ပါ။ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက အပိုဆောင်းဒေတာများအပြင် ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack များဝယ်ယူပါက အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် (ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၆)နာရီအထိ)ကို ရက်၃၀ သက်တမ်းဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၁၂။ ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ဝယ်ယူရင် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရမှာလဲ။ ဝယ်ယူရမည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ထားပါသလား (ဥပမာ - MPT4U၊ USSD အစရှိသဖြင့်)?
သတ်မှတ်မထားပါ။ MPT4U၊ *777#၊ *500#၊ *106# အစရှိသဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Packs နှင့် Htaw B အသစ်ဝယ်ယူလိုက်တိုင်း အပိုဆောင်းခံစားခွင့် များ ရရှိမှာပါ။ ထို့အပြင် သောကြာနေ့တွင် ၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus Pack များဝယ်ယူပါက Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက အပိုဆောင်းဒေတာများအပြင် အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် (ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၆)နာရီအထိ)ကို ရက်၃၀ သက်တမ်းဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၁၃။ Friday မှာ Data Carry Plus Packs နဲ့ Htaw B ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ Data Carry Plus Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍ “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင် ပေးလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Htaw B Pack ကို လက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက *500# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။ သောကြာနေ့တွင်လက်ဆောင်ပေးပါက လက်ဆောင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ Data Carry Plus (သို့) Htaw B ၏ သောကြာနေ့တွင်ရရှိမည့် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။